चीन हाइड्रोलिक भल्भ निर्माता र आपूर्तिकर्ता - हाइड्रोटेक
घर > उत्पादनहरू > हाइड्रोलिक सहायक उपकरण > हाइड्रोलिक भल्भ
एक हाइड्रोलिक भल्भ दबाव तेल द्वारा संचालित एक स्वचालन घटक हो। यो दबाव वितरण भल्भ को दबाव तेल द्वारा नियन्त्रित छ। यो सामान्यतया एक विद्युत चुम्बकीय दबाव वितरण भल्भ संग संयोजन मा प्रयोग गरिन्छ। यो जलविद्युत स्टेशनहरूको तेल, ग्यास, र पानी पाइपलाइन प्रणालीको अन र अफलाई टाढाबाट नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्यतया clamping, नियन्त्रण, स्नेहन र अन्य तेल सर्किट लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष-अभिनय प्रकार र पायलट प्रकार छन्, र पायलट प्रकार प्राय: प्रयोग गरिन्छ।
हाइड्रोलिक्स औद्योगिक उत्पादनमा अपरिहार्य मूल तत्व हो र कोइला खानी, धातु विज्ञान र कास्टिङमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कृषि। रासायनिक र अन्य स्वचालित मेसिनरी उद्योगहरू। हाइड्रोलिक भल्भ हाइड्रोलिक घटक को एक महत्वपूर्ण भाग हो।
नियन्त्रण कम्पोनेन्टहरू (विभिन्न हाइड्रोलिक भल्भहरू) हाइड्रोलिक प्रणालीमा तरलको दबाब, प्रवाह र दिशालाई नियन्त्रण र विनियमित गर्दछ। हाइड्रोलिक भल्भहरूलाई दबाव नियन्त्रण भल्भ, प्रवाह नियन्त्रण भल्भ र दिशात्मक नियन्त्रण भल्भहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
हाम्रो कम्पनी अब मेरो देशमा हाइड्रोलिक उत्पादनहरूको विस्तृत दायरा समेट्ने, उत्पादन प्रविधिको गुणस्तरमा नेतृत्व गर्ने र स्वतन्त्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू भएका केही प्रख्यात व्यापक हाइड्रोलिक उद्यमहरू मध्ये एक भएको छ। हामी हाइड्रोलिक भल्भका साथै हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरूको उच्च गुणस्तर प्रस्ताव गर्दछौं।
हाम्रा सबै हाइड्रोलिक भल्भ परीक्षण गरिएका छन्, किनभने हामीसँग ISO9001 व्यवस्थापन प्रणालीहरूको पूर्ण सेट छ, उत्तम परीक्षण क्षमताको साथ, जुन उत्पादनहरूको उत्पादनको लागि तयार छ, त्यसैले उत्पादन अनुकूलित गर्दा उत्पादनको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। एकातिर, हाइड्रोटेक चीनमा प्रसिद्ध हाइड्रोलिक भल्भ निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक हो। अर्कोतर्फ, यो चीनको उच्च प्रविधिको उद्यम पनि हो। त्यसमाथि, हाइड्रोटेकको आफ्नै कारखाना छ र विश्वव्यापी ग्राहकहरूलाई उत्पादनहरूको कुल समाधान उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ। यदि म अहिले अर्डर गर्छु भने के तपाईंसँग स्टकमा हाइड्रोलिक भल्भ छ? अवश्य पनि, हामीसँग हाम्रो आफ्नै कारखाना छ भन्ने आधारमा, एकै समयमा, हामीसँग प्राविधिक समर्थन प्रदान गर्न एक पेशेवर प्राविधिक टोली छ। मैले किनेको भए तिम्रो मूल्य कति होला? यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने हामी मूल्यमा कुराकानी गर्न सक्छौं। उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू किन्नको लागि हाम्रो कारखानामा स्वागत छ। सहकारिताबाट मात्रै विकास, जित र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने व्यापक भनाइ छ । हामी तपाई संग धेरै सहयोग को लागी तत्पर छौं।